किन गरिन्छ तुल’सीको पू’जा ? यस्तो छ धार्मि’क कथा र वैज्ञा’निक कारण : – Sadhaiko Khabar
किन गरिन्छ तुल’सीको पू’जा ? यस्तो छ धार्मि’क कथा र वैज्ञा’निक कारण :
प्रकाशित मिति: सोमबार, कार्तिक २९, २०७८ समय: ९:४९:२२
काठमाडौँ / हरेक वर्ष कार्तिक शुक्ल प’क्षको एकादशीका दिन हि’न्दूहरुले तुलसीको विवाह गर्ने गर्छन् । यो वर्ष तुलसी वि’वाह आज कात्तिक २९ गते सोमबार परेको छ । उक्त दिनलाई हरिबोधिनी एकादशी वा देवउठनी एकादशी समेत भनिन्छ ।
हरिशयनी एकादशीका दिन सुतेका भगवान् विष्णु (श्रीहरि) हरिबोधिनी एकादशीकै दिन उठ्ने विश्वास गरिन्छ । यससँगै अन्य देवताहरु समेत उठ्ने विश्वास गरिन्छ । यही दिन विष्णुप्रिया तुलसीको वि’वाह भगवान् विष्णुकै प्रतीक मानिने शालिग्राम शिला (ढुंगा) सँग गरिन्छ ।
तुलसी वि’वाहको पौराणिक कथा :-
कार्तिक शुक्ल एकाशदीका दिन तुलसीको वि’वाह गर्ने प्रचलन कसरी चल्यो ? यस सन्दर्भमा एक पौराणिक कथा छ । किंवदन्ती अनुसार वृन्दा नाम गरेकी एक सद्गुणी स्त्री थि’इन् । उनका पति जलन्धर क्रू’र र भगवान वि’रोधी भएर त्रिलोधिपति बनेर बसेका थि’ए ।
वृन्दाको पवित्रताका कारण नै उनी अ’जेय र श’क्तिशाली रहेको भनिन्थ्यो । उनलाई म’हादेवले पनि ह’राउन स’केनन् । त्यसपछि सबै देव’ताहरूको आ’देशमा श्रीहरि (विष्णु)ले जालन्धरको रूप धारण गरी वृन्दाको प’तिव्रत (स’तीत्व) भं’ग गरिदिए ।
विष्णुले जा’ल गरेर आफ्नो प’वित्रता भं’ग गरेको थाहा पाएपछि वृन्दाले आ’त्मदाह गरिन् । त्यसपछि उनको ख’रानीको रा’शमाथि एक वनस्पती बोट उम्रियो । तब भगवान् विष्णुले भन्नुभयो– आजदेखि उसको नाम तुलसी हो र मेरो एउटा रूप यही ढुङ्गाको रूपमा रहनेछ, जसलाई शालिग्रामको नामले जा’निनेछ । र मेरो (शालिग्राम ढुंगा) को तुलसीजीसँगै पूजा गरिने छ, तुलसीबिनाको प्रसाद म ग्रहण ग’र्दिनँ ।
त्यसैबेलादेखि सबैले तुलसीको पूजा गर्न थालेको भनाइ छ । र, कात्तिक शुक्ल एकादशीका दिन तुलसीको वि’वाह शालि’ग्रामसँग गरिदिने परम्परा बस्यो ।
हरिबोधिनी एकादशीकै दिन किन वि’वाह ?
प्रचलित मान्यताअनुसार, करिब ४ महिना लामो योग निद्राबाट ब्यूँझिएपछि भगवान् विष्णु (श्री हरि)ले माता तुलसीको पु’कार सबैभन्दा पहिले सुन्छन् ।
एक्त एकादशीमा भगवान् विष्णुसँगै सबै देवताहरुले पनि यो’ग नि’द्रा त्या’गेर ब्युँझन्छन् । उक्त दिन भगवान् विष्णुको पूजा गरिन्छ अनि त्यसपछि विष्णुरुप शा’लिग्रामसँग तुलसीको वि’वाह गरिन्छ ।
त्यही दिनदेखि नै हिन्दू संस्कारभित्र वि’वाह, मु’ण्डन, व्रतबन्धजस्ता मांगलिक कार्यहरु समेत गर्नु शुभ मानिन्छ । त्यसअगाडि र हरिशयनी एकादशीपछिका करिब ४ महिना विष्णु र दे’वताहरु सु’त्ने भएकाले वि’वाह, व्रतबन्धजस्ता मांगलिक कार्य ग’रिँदैन ।
तुलसी विवाह गर्ने दिन श्रीहरिलाई ज’गाउनको लागि यो मन्त्रको जप गर्नुपर्ने शास्त्रमा बताइएको छ–
यस्ताे छ वि’वाह विधि :-
तुलसीकाे विवाह गर्दा हिन्दू वै’वाहिक संस्कारजस्तै सबै कार्य सम्पन्न गरिन्छ । वि’वाहको समयमा मंगल गीत (फाग) पनि गाउने गरिन्छ ।
हरिबाेधिनी एकादशीको साँझ तुलसीको मठलाई गेरु वा रा’ताे पहेँलाेले रंगराेगन आदि गरेर सजाइन्छ । त्यसपछि मठकाे चारैतिर मण्डप बनाएर त्यसमाथि दु’लहीले लगाउने घुम्टी आकारको वस्त्र (चुनरी) ओढाउने, मठलाई साडीमा बेरेर तुलसीलाई चुरापाेते समेत लगाइदिएर श्रृंगार गर्ने गरिन्छ । दुलहीझैँ सिँगारिन्छ ।
सिंगारपटार सकिएपछि भगवान गणेश आदि देवताहरुको पूजन हुन्छ । साथै शालिग्राम शिलाको पनि विधिवत रुपमा पूजा गरेर तुलसीलाई षोडशोपचार पूजा ‘तुलस्यै नमः’ मन्त्रमार्फत गर्नु गरिन्छ । त्यसपछि एउटा नरिवल, दक्षिणाका साथ टीकाको रुपमा राख्नु पर्छ ।
अनि भगवान शालिग्रामको मूर्तिको सिंहासन हातमा लिएर तुलसीको मोठलाई सात पटक परिक्रमा गराउनुपर्छ । यी सबै कर्मकान्ड सकेर आरती गर्ने गरिन्छ भने त्यसपछि वि’वाहोत्सव सम्पन्न हुन्छ । तर याे चलन सबैतिर पूरा गर्ने गरेकाे दे’खिन्न, सक्नेले सबै विधि पूरा गर्छन् ।
– तुलसी भगवान विष्णुका लागि धेरै नै प्रिय मानिन्छिन् । तुलसी देवी वृन्दाको रूप अर्थात् प्रतीक हो, जसलाई विष्णुले लक्ष्मी (वि’ष्णुपत्नी) भन्दा पनि बढी प्रिय ठान्छन् ।
– कार्तिक महिनामा तुलसीको पूजा गर्नाले विशेष पुण्य प्राप्त हुन्छ र जीवनबाट सबै दुः’ख तथा क’ष्ट टाढा भा’ग्छ ।
– शालिग्रामसँगै तुलसीको पूजा गर्दा अका’लमा मृ’त्युकाे भ’य हुँ’दैन ।
– कार्तिक शुक्ल एकादशीको दिन तुलसी र शालिग्रामको विधिपूर्वक पूजा गरेमा वैवाहिक जीवनमा आइरहेका स’मस्या सबै अ’न्त्य हुने विश्वास गरिन्छ ।
– यदि कसैकाे विवाह भइरहेकाे छैन भने तुलसी वि’वाह गराइिदनाले एवं तुलसी र शालिग्रामकाे पूजा गर्नाले वि’वाह हुने नि’श्चित हुन्छ ।
– तुलसीकाे वि’वाह गराउनाले क’न्यादान गरिदिएजस्तै पुण्य प्राप्त हुन्छ । कार्तिक महिनामा तुलसीको पूजा गर्नु र यसको बोट दान गर्नु उत्तम मानिन्छ।
– तुलसीको पूजा मात्र हैन, यसकाे पात, फूल लगायत से’वन गर्नाले सबै प्रकारका रो’ग र दु:’खहरू ह’टाउँछ एवं सौभाग्य बढाउँछ । तुलसी चिया स्वास्थ्यका लागि राम्राे मानिन्छ ।
– यस दिन हरिबाेधिनी एकादशीको पौराणिक कथा वाचन वा श्रवण गर्नुपर्छ । कथा सुन्दा वा सुनाउँदा मात्र पनि पुण्य प्राप्ति हुने मान्यता छ ।
– शालिग्राम र तुलसीको पूजा गर्दा पि’तृदोष समेत कम हुन्छ ।
– श्रीहरि (विष्णु)लाई तुलसीकाे एक पात मात्र सम’र्पित गर्नाले पनि वै’कुण्ठ लो’क प्राप्त हुने धार्मिक मान्यता छ ।
– वैज्ञानिक मान्यता अनुसार पनि पिपल र तुलसीलाई सबैभन्दा धेरै अक्सिजन दिने वनस्पति मानिन्छ । मानिस लगायतका जीवजन्तुहरुलाई नभई नहुने अक्सिजन प्राप्त हुने वनस्पतिका रुपमा पनि तुलसीको पूजा गर्नु र संरक्षण गर्नु राम्रो मानिन्छ ।
प्रस्तुति : राजेन्द्र तारकिणी / न्यु’ज 24 नेपा’लबाट ।